Properties for Sale in Kamaryut - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Kamaryut
ကမာရွတ်မြို့နယ် Hledan Center condo ရောင်းမည်
ကမာရွတ်မြို့နယ် Hledan Center condo ရောင်းမည်...
Phone No. To Contact Honey Real Estate
Ad Number S-10179555
Honey Real Estate Close
ကမာရွတ် လှည်းတန်းစင်တာအနီး မာလာရိပ်သာလမ်း Luxury condo ရောင်းမည်
လှည်းတန်းစင်တာ အနီး မာလာမြိုင်ရိပ်သာလမ်း Luxury condo ရ...
Ad Number S-10179514
လွည္းတန္းအနီး ကားပါကင္ Fully Backup Generator ပါေသာ ကြန္ဒိုတြင္ အခန္းေရာင္းမည္
- မာစတာခန္း (1) ခန္း - ရိုးရိုးခန္း (1) ခန္း - ...
Ad Number S-10175183
ကမာရြတ္ ဘုရင့္ေနာင္တာ၀ါတြင္ ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းေရာင္းမည္
- မာစတာခန္း (1) ခန္း - ရိုးရိုးခန္း (2) ခန္း - ...
Ad Number S-10175169
ကမာရြတ္ Crystal Residence တြင္ အခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10175164
ကမာရြတ္ Time City condo အခန္းေရာင္းမည္
Ad Number S-10175151
ကမာရွတ်၊ Inya View Condo (1500Sqft) (ပြင်ပြီး) ရောင်းမည်။
ကမာရွတ်၊ Inya View Condo (1500Sqft) BR-1 (ပြင်ပြီး) F...
09458887972, 09422888892, 09422888893, 09422888894, 09458887972
Ad Number S-10168864
သံလွင်လမ်း ဝင်ဒါမီယာရှိ Swimming Pool ပါသော ခြံဝန်းကျယ် လုံးချင်းတိုက် ရောင်းမည်
Ad Number S-10179587
ကမာရွတ်မြို့နယ် လှည်းတန်းစင်တာ ကွန်ဒို ရောင်းမည်
Ad Number S-10179526
Ad Number S-10178672
Ad Number S-10178669
7 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Ad Number S-10178228
(1450 sqft)အကျယ်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ဇေယျာသီရီလမ်း၊ ပန်သစ္စာကွန်ဒို ရောင်းရန်ရှိ
1,380 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10177853
ကမာရြတ္ လွည္းတန္းအနီး ကားပါကင္ပါ ကြန္ဒိုအခန္းအေရာင္း
Ad Number S-10177279
Ad Number S-10177262